ब्रह्माण्डमा एक्लो मानव ? नयाँ अध्ययन भन्छ - अर्को ग्रहमा जीवन र सभ्यता छैन !
मानिसहरु वर्षौँदेखि अन्य ग्रहमा बसोबास गरेका भनिएका एलियनको खोजीमा छन् । उनीहरुले यहाँबाट धेरै रेडियो तरंग पठाएर एलियनसँग सम्पर्क गर्ने तयारी गर्ने गरेका छन् । तर आजसम्म मानिसले एलियन भएको